मुस्ताङ अपडेट : सबैतिर सुर्यकै ताप, काँग्रेस भयो पत्तासाफ !
ARCHIVE, CHUNAB » मुस्ताङ अपडेट : सबैतिर सुर्यकै ताप, काँग्रेस भयो पत्तासाफ !
मुस्ताङ - मुस्ताङमा एक प्रतिनिधीसभा र दुई प्रदेशसभा सदस्य गरी तीनै स्थानमा सुर्य उदाएको छ । अर्थात तीनै ठाउँमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । मुस्ताङमा प्रतिनिधीसभातर्फ वामगठबन्धनबाट प्रेमप्रसाद तुलाचन ३५४४ मत लिएर विजयी भएका छन् । ९ हजार ४ सय २७ मतदाता रहेको मुस्ताङमा ४६ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
यसो त कांग्रेस यो क्षेत्रमा पत्तासाफ नै भएको छ । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीले ३१८१ मत ल्याएका थिए । यता प्रदेशसभा तर्फ निर्वाचन क्षेत्र क तर्फ लोमान्थाङका इन्द्रधारा विष्ट ११६७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । त्यहाँ पनि कांग्रेस पत्तासाफ भएको छ ।उनका निकटमक प्रतिबद्वन्द्वी कांग्रेसका मिङकर गुरुङले ६५७ ल्याएका छन् ।
यता प्रदेशसभा तर्फ निर्वाचन क्षेत्र खमा वाम गठठबन्धनकै महेन्द्रबहादुर थकालीले २४८४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका छिरिङधावा गुरुङले २२५९ मत ल्याएका छन्।